Ngalaba Spiro Apicmo ndi na-emeputa ihe ohia
ngwaahịa > Ogigeiro Spiro
Kedu ihe bụ Spiro ogige?
Otu mkpụrụ akụkụ (nke a na-akpọkwa spirane) bụ organic, na-emepụta kemịkal nke nwere mgbagwoju anya nke ihe karịrị otu mgbaaka. N'ebe a, a na-ejikọta ihe yiri mgbaaka site n'otu mgbochi nke ọ bụ maka mmadụ niile. N'ezie, e wepụtara aha ahụ bụ "spiro" site na okwu Latịn spira, nke pụtara iberibe ma ọ bụ ịgbagharị.
Ihe kachasị mkpa nke ogige spiro bụ bicyclic, na-enwe nanị mgbidi abụọ. (dị ka abụọ). Ma ọ bụ, ọ nwere ike ịnwe akụkụ bicyclic nke ga-abụ obere akụkụ nke usoro mgbanaka ka ukwuu. Kedu ihe ọ bụ, ihe niile yiri mgbaaka jikọtara site na otu atọm akọwapụta nke na-anọchite anya mmadụ niile.
Mgbe ụfọdụ, Spirane bụ carbocyclic ma ọ bụ heterocyclic. Carbocyclic pụtara na ogige nile bụ carbon, ebe heterocyclic pụtara na ogige nwere otu ma ọ bụ karịa ntinyeghị carbon.
Ogige ndị nwere oghere nwekwara ndepụta nke ọgwụ dị iche iche dị n'okpuru ha. E depụtara ọgwụ ndị a n'okpuru -
Ụdị Dị iche iche nke Spiro Structure
Dị ka ha si arụ ọrụ mgbanaka, a na-ekewa mbara igwe na mpaghara ndị ọzọ dị iche iche.
1.Carbo-cyclic Spiro Compound
A na-eji ogigeiro Spiro n'ụwa dum. A na - eji ọtụtụ ogige ndị a eme ihe dị ka ogwe ihe ọrụ maka ọmụmụ ihe n'ọhịa biomedical. A na-eji ogige ndị a mee ihe dịka usoro maka nlekọta ahụike, site na-arụ ọrụ dị ka scaffolds.
Nyocha zuru oke banyere ọgwụ ọjọọ n'okpuru ndị na-akwado Spiro
Onu ogugu ogwu a bu DB00490. Buspirone bụ nke ndị azaspirodecanedione class class, ọ bụ onye na-agwọ ọrịa serotonin agonist na onye ọrụ nchegbu. Ọzọkwa, ọgwụ ahụ nwere arụmọrụ nke a pụrụ iji tụnyere nke diazepam.
A na-ejikarị ọgwụ eme ihe maka ịgwọ ịda mbà n'obi na nsogbu nchekasị.
Onu ogugu ogwu a bu DB04842. Ụdị obere ngwongwo, ọgwụ a bụ onye na-egbochi ọgwụ mgbochi nke na-adịte aka, a pụkwara ịgbanye ya. A na-eji Flusfiklene mee ihe maka ọgwụgwọ nke na-adịghị ala ala.
Onu ogugu ogwu a bu DB00693. Na mgbakwunye na ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na ihe ịchọ mma maka nzube mpụga, a na-eji ọgwụ a eme ihe dị ka enyemaka maka trauma na ahụrụ na-emerụ ahụ. Ọ bụ ihe na-acha odo odo na-acha odo odo - nke na-acha akwụkwọ ndụ na-acha ọbara ọbara mgbe ọ na-eme ka ihe nkiri dị mma. Ma, ọ nwere ike ịpụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka ihe ọchị ọchị.
Onu ogugu nke a bu DB13911. Phloxine B ma ọ bụ Phloxine bụ mgbakwunye agba. A na-eji ya agba agba n'ime mbadamba nkume egosiputa (eze), na dịka ihe mgbochi dina iji nye aka tinye agba na ngwaahịa. N'okwu mbụ, mbadamba nkume ahụ na-enyere ndị ọrịa aka na-eche echiche ebe ndị ọzọ na-achọrọ ichikota.
Onu ogugu ogwu a bu DB12030. Ọ bụ obere udu mmiri nke a na-ejikarị eme ihe n'ule maka ubi ọmụmụ dịgasị iche iche. Nchoputa nke ịba ọcha n'anya, Ghari, Human, Nonalcoholic Steatohepatitis, Cirrhosis Hepatic, Pharmacokinetics and Non-Alcoholic Fatty Liver Ọrịa bụ ubi.
Igosi ihe niile 6 pụta
site na APICMO